म घमण्डी हैन, हक्की मान्छे हुँ– मन्त्री बास्कोटा « हाम्रो ईकोनोमी
पहिलोचोटि मन्त्री भएको १४ महिना कस्तो रह्यो ?
मन्त्री मात्र नभएर संसद नै पहिलोपटक भएको हुँ । सोचेकै गतिमा अगाडि बढेको छु । परिणाम चाहिँ देखिन बाँकी छ । मन्त्रालय सम्हालेको २–३ महिना स्ट्रक्चर बुझ्न लाग्यो । कमि–कमजोरीहरु पत्ता लगाएर केही परियोजना अगाडि बढाएँ । एक हिसाबले यो १४ महिनामा जग खन्ने काम भएको छ ।
मन्त्रालयभित्र तपाईंले प्राथमिकतामा राख्नुभएका कुराहरु के–के छन् ?
धेरै विषय चालु नै थिए । तर, अघि बढ्न सकेका थिएनन् । एउटा त काठमाडौंमा बक्स अफिस लागू गरेँ । तपाईंको अन्तरवार्ता प्रकाशित हुँदासम्म काठमाडौं बाहिर पनि बक्स अफिस पुगिसकेको हुनेछ । यसले नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुले ठूलो राहत पाएका छन् ।
अर्को, नेपाल टेलिकमको ४ जी परियोजना सञ्चालनमा अघि बढेको छु । मुद्दा चरणबाट पार भएर ३३ महिनाका परियोजनालाई १२ महिनाबाट सक्नेगरी सम्झौता गराएर सर्भेको र सामानहरु अर्डर गर्ने काम भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, अघि बढेको अर्को परियोजना हो–सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस । स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, एटिएम कार्ड लगायतका लागि बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसबाट १०–१२ अर्ब स्वदेशी पैसा बाहिरिन्छ । त्यसैले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निश्चय गरेँ । प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । यो ३ वर्ष लामो प्रोजेक्ट हो । सार्वभौमिकताको दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण छ । किनकि बायोमेट्रिक डाटा अरु देशमा जानु राम्रो होइन ।
पत्रकारिता क्षेत्रको कानूनी सुधारमा हात हालेको छु । त्यसमा बहस जारी छ । क्लिन फिड र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्याटेलाइटको योजना पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै, वडा कार्यालयहरु, स्वास्स्थ्य चौकी, विद्यालय बस्तिमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम त पहिल्यै सुरु भएको हो क्यारे । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट तामझामसहित उद्घाटन गराएर काम देखाउनु खोज्नुभएको हो ?
नक्कली कुरा नगरौं । विगतमा एउटा कम्पनीले कर्णालीमा १५ मिटर खन्यो, त्यो भागिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म सुरु गरेको हो । प्रदेश ४ र ५ मा काम केही भएको छैन । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सिराबाट काम सुरु गरेका हौं ।
फेरि तामझाम के गरियो र ? सुरु गरेको सन्देश त दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभयो । धादिङका जनता आए । डोजर लगियो । पाइप बिच्छाइयो । यत्ति न हो । कुनै घोडा–बग्गी थिएन । करोडौं खर्च गरिएको होइन । नकारात्मकरुपमा मानसिकता भएकाहरुले सामान्यखालको कार्यक्रमलाई पनि तामझाम भनेर टिप्पणी गरे ।
मन्त्री भएदेखि नै एकपछि अको विवादमा मुछिँदै आउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा सरकारको सबैभन्दा आलोचित पात्र तपाईं नै हुनुहुन्छ । अब त सच्चिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
मान्छेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी आफ्नो कमजोरी नदेख्नु हो । जसले मेरो आलोचना गर्नुभएको छ, उहाँहरु पनि दुधले नुहाएको पक्कै हुनुहुन्न । मेरा पनि केही केही स्वभावगत कमजोरी होलान् । तर, मुख्य कुरा नियत हो । नियतको कसीमा हेर्नुहुन्छ भने कसैले मलाई प्रश्न उठाउन सक्दैन । इमान्दारितामा कसीमा पनि कसैले मलाईं औंलो ठड्याउन सक्दैन ।
शील स्वाभाव–बानी व्यहोरा चाहिँ मानिसका आफ्ना–आफ्ना हुन्छन् । कसैको अन्तरमुखि स्वभाव हुन्छ, कसैको बहिर्मुखी । कोही नराम्रो कुरा पनि कूटनीतिक लवजमा घुमाएर बोल्छन्, कोही सिधासिधा बोल्छन् । कोही चिप्लो कुरा गर्न माहिर हुन्छन्, । कोही त्यस्तो गर्दैनन् । मेरो स्वभाव खस्रो नै छ । मैले राम्रो कुरा पनि ठाडो तरिकाले बोल्ने भएकाले कसैलाई गाली गरेजस्तो लाग्दो हो ।
तर, यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जसलाई म हिँडेकै मन पर्दैन । म हाँसेकै मन पर्दैन । उनीहरु मेरो खेदो खन्नलाई दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । चुनावको कुरा गर्छु । मतदाताहरुले नमस्कार गर्दा म पछाडि फर्किएँ भनेर फोटो हालेछन् । चुनाव प्रचारमा जाँदा सबैतिर मानिसहरु हुन्छन् । एकैपटक सबैलाई नमस्कार फर्काउन सकिँदैन । अनि, एकातिर नमस्कार फर्काएको बेला अर्कोपट्टिबाट फोटो खिच्दा पछाडि फर्केको देखिन्छ । यस्ता पूर्वाग्रहले ग्रसितहरुको आरोपमा के जवाफ दिइरहनु ?
कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएका तटस्थ जनमानसले पनि तपाईंलाई छुच्चो र घमण्डी नेताको रुपमा चिन्न थालेका छन् । आफूलाई ऐनामा हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?
म घमण्डी छैन । बिल्कुलै छैन । बरु म दृढ छु । मनमा कुनै संकल्प लिएपछि त्यसमा सदासर्वदा अडिक रहन्छु । छुच्चो पनि म आफूलाई मान्दिनँ । बरु हक्की छु । तपाईंसित कुरा गर्दा छुच्चो देख्नुभएको छ त ? घुमाउरो बोल्ने कि सिधा बोल्ने भन्ने प्रश्नमा म सिधा र खस्रो बोल्छु । माधव घिमिरेको कविता जस्तो मिठो लवजमा बोल्दिनँ । घुमाउरो र कुटनीतिक भाषा मलाई आउँदैन । मैले सामान्यरुपमा बोल्दा पनि कसैलाई झोक्किएको जस्तो लाग्छ । त्यसमा म के गरुँ ?
र, मैले अघि पनि भनेँ । ईमान, नैतिक चरित्र र नियतमा मलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यसमा म एकदमै सचेत छु । ‘ज्यू हजुर’ गर्ने र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने स्वभाव मेरो रगतमा छैन । कसैले मेरो चाकडी गर्न खोज्यो भने पनि मन पर्दैन । उसलाई ठाडै हप्काइदिन्छु ।
चुनावमा भोट माग्न त चिप्लो कुरा गर्नुपर्छ, तपाईंजस्तो खस्रो व्यक्तिले मतदाता कसरी फकाउनुभो ?
मतदाता भनेको कुनै फकाउने कुरा होइन । कामले उहाँहरुको मन जित्ने हो । म यही जिल्लाका मतदाताहरुको बीचमा हुर्केको हुँ । मेरो आनिबानीदेखि योगदान सबै उहाँहरुलाई थाहै थियो । मतदाता रिझाउन दुई–चार शब्द झूट बोलेर एउटा चुनाव त जितिएला तर दिगो राजनीति हुँदैन । म आफू जस्तो छु, त्यस्तै रुपमा पेश भएँ । मलाई मतदाताले त्यस्तै रुपमा मन पराउनुभएको छ ।
पार्टी संगठन नै बलियो भएकाले जित्नुभएको पनि त हुन सक्छ ?
पार्टी संगठन पनि बलियो हो । हाम्रो अनुमानमा हामी ८–१० हजार मतले अगाडि थियौं । तर, १९ हजार भोट अन्तरले जितेँ । बाँकी व्यक्तिगत लोकप्रियताका भोट हुन् ।
चुनाव जितेर आफ्नो क्षेत्रका लागि केके गर्नुभयो ?
म जनताको सुखः दुखमा सँगै छु । अहिले पनि एक दिन फुर्सद पाए घुर्र गाउँ पुगिहाल्छु । के–कति काम गरेँ भन्ने चाहिँ त्यहीँ पुगेर हेर्दा हुन्छ । जनतालाई सोध्दा हुन्छ । म आफैंले के बयान गर्नु ?
चाकडी गर्न आउँदैन भन्नुभो । तर, तपाईंले केपी ओलीको चाकडी गरेर मन्त्री पद पड्काएको ठान्छन् नि धेरैले ?
त्यो मलाई हेर्नेहरुको दृष्टिदोष हो । म कुनै संघर्ष नगरी रातारात यो पार्टीमा फुत्त उम्रेको नेता होइन । प्रधानमन्त्रीले खत्रक्क आफ्नो गोजीबाट निकालेर मलाई मन्त्री बनाएको पनि होइन । न म कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको राजकुमार प्रवृत्ति नै हुँ । संघर्षबाट खारिएर यहाँसम्म आएको छु । मैले मन्त्री पदको माग गरेको थिइनँ । अचानक जिम्मेवारी दिइयो, मैले स्वीकारेँ । यत्ति हो ।
मन्त्री बन्ने आकांक्षा नै थिएन त ?
अहँ थिएन । मलाई त संसदको टिकट नै पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने थियो । विगतमा चारवटा चुनावमा एमालेका उम्मेदवारलाई बोकेर हिँडेँ । यसपालि पार्टीले मलाई टिकट दियो । टिकट दिएपछि जित्छु कि जित्दनँ भन्ने थियो । मन्त्री बन्ने त धेरै परको कुरा हो ।
चुनाव जितेपछि त मन्त्री पदका लागि कतै धाउनुभएन ?
म मन्त्री बन्नै नहुने भन्ने त थिएन । तर, मन्त्री बन्नैपर्छ भनेर लागिपरेको होइन । चुनाव जितेपछि अध्यक्ष कमरेडको निवासमा गएको थिएँ, सामान्य भेटघाटका लागि । उहाँले खादा लगाएर बधाई दिनुभयो । मैले धन्यवाद भनेँ । केहीबेर कुराकानी भयो । उहाँले खाना खाएर जाउ भन्नुभयो । खाएँ । त्यो भेटमा उहाँले मलाई मन्त्री बनाउने सानो संकेत पनि गर्नुभएको थिएन । न त मैले नै कुनै अपेक्षा राखेँ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदको सपथ खानुभएपछि पनि भेट भयो । उहाँले मलाई को–कोलाई मन्त्री बनाउँदा ठिक होला भनेर सोध्नुभयो । मैले भनेँ, ‘तपाईंले सबैको क्षमता चिन्नुभएको छ । योगदान र समर्पण देख्नुभएको छ । हिमाल, पहाड, तराई बुझ्नुभएको छ । आफैंले मूल्यांकन गर्नुस । फेरि भर्खर पार्टी एकता भएकाले धेरै खालका सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ ।’ उहाँले ठीक हो भनेर मुन्टो हल्लाउनुभयो ।
आफूले मन्त्री बनाउन चाहेका केही नेताहरुको नाम लिनुभयो । तर, मलाई मन्त्री बनाउने कुरा गर्नुभएन ।
कहिले र कसरी थाहा पाउनुभयो त मन्त्री बन्दैछु भन्ने ?
चैत २ गते सांसद सदस्यहरुको सपथग्रहण थियो । त्यही दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने चर्चा पनि चलेको थियो ।
संसद वैठक चल्दै गर्दा हाम्रो पार्टीका नेताहरु एक–एक गर्दै फुत्त फुत्त निस्किन थाले । म हेरिरहेको थिएँ । पहिले गोकर्ण बिष्ट घडी हेर्दै निस्किनुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर तामाङ निस्किनुभयो । अनि रवीन्द्र अधिकारी पनि हतार छ भन्दै निस्किनुभो । यसरी निस्किएका नेताहरुको नाम मन्त्री बन्ने सुचीमा छ भन्ने मलाई जानकारी थियो ।
त्यसपछि म शौचालय गएर फर्किँदा पद्मा अर्यालसँग भेट भयो । उहाँ पनि हतारमा हुनुहुन्थ्यो । मैले कता हिँडेको ? भनेर सोधेँ । उहाँले गमक्क परेर भन्नुभयो, ‘हिँडेको नि…।’ मैले कुरा बुझिहालेँ । अनि ‘ल बधाई छ, मन्त्री हुन लाग्नुभएकोमा’ भनेँ । उहाँले ‘आफू पनि त हुने होला नि’ भन्नुभयो । मैले भनेँ, ‘मेरो त थाहा छैन, तपाईं चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ ।’
उहाँ हुर्रिएर जानुभयो । म संसदभित्र पसेँ । केहीबेरमा बैठक सकियो । अनि सबै लाखापाखा लागे । म पनि एकजना कार्यकर्ताको गाडीमा चढेर घरतिर लागेँ ।
अनि, कतिबेला फोन आयो ?
म भन्दैछु त । हामी गाडीमा तीनकुने पुगेपछि फोनको घन्टी बज्यो । विष्णु रिमालले गर्नुभएको रहेछ । कता हो साथी ? भन्नुभयो । मैले घर फर्किँदै गरेको बताएँ । अनि उहाँले सोध्नुभयो, ‘तपाईंलाई कसैले केही भनेन ?’ मैले ‘अहँ’ भनेँ । त्यसपछि उहाँले ‘ल मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन दिएँ’ भन्नुभो । अनि प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो । उहाँले सोध्नुभो, ‘कहाँ हो ?’ मैले ‘तीनकुनेमा छु’ भनेँ । अनि सोध्नुभयो, ‘तारा (मेरी श्रीमती) कहाँ छिन् ?’ मैले घरमा छिन् भनेँ । उहाँले आदेश दिनुभयो, ‘ल, ५ बजे तारालाई पनि लिएर आउ ।’
म अलमल्ल परेर सोधेँ, ‘कहाँ आउने ?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘शीतलनिवास नि, अरु कहाँ ?’
मेरो कौतुहल बढ्यो । सोधेँ, ‘किन ?’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरुको सपथग्रहण छ ।’
तर, उहाँले मलाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्नुभएन । त्यतिबेला पौने पाँच बजिसकेको थियो । मैले भनें, ‘५ बजे त आइपुग्दिनँ होला । फूल पनि त किन्नुपर्‍यो ।’
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘फूल त दिनेले देलान् नि ।’
मलाई अलिकति झस्का पर्‍यो । तैपनि प्रष्ट भएन । मैले तारा घरमै भएकाले लिएर आउन नभ्याउने बताएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, ‘ठीक छ, त्यसो भए उनलाई घरमै घडा थापेर बस्न भन्नु ।’
अब बल्ल मलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीले पक्कै मलाई कुनै जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ । तैपनि सोध्न सकिनँ ।
लुगाको विषयमा सोध्नुभएन ?
अँ सोध्नुभयो । लुगा के लगाएको छ भन्नुभयो । म संसदको सपथ खान औपचारिक पोशाकमै गएको थिएँ । दौरासुरुवाल नै लगाएको छु भनेँ । कोटको रंग पनि सोध्नुभयो ।
त्यहाँबाट गाडी फर्काउनुभयो कि घरतिर जानुभयो ?
घर जान भ्याइने स्थिति रहेन । त्यसैले तीनकुनेबाटै ‘यू टर्न’ भयौं । बाटोमा श्रीमतीलाई फोन गरेँ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएँ । मन्त्री बन्दैछु भनेर चाहिँ भन्न सकिनँ । उनले ‘म पनि जान्थेँ नि’ भनिन् । मैले घरमा घडा राख्नलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सुनाउँदा उनी पनि अलमल्ल परिन् ।
कतिबेला चाहिँ तपाईं ढुक्क हुनुभयो त मन्त्री बनेको कुरामा ?
त्यो त सपथ खाने बेलामा मात्र । शीतलनिवास पुग्दा प्रधानमन्त्रीज्यू स्टेजमा उक्लिसक्नुभएको थियो । उहाँलाई सोध्ने कुरा भएन । सपथ खुवाउने बेलामा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले हामीलाई छुट्याएर अर्कोपट्टि राखेपछि चाहिँ बल्ल एकिन भयो । कुन मन्त्रालय पाएँ भन्ने त सपथ खाँदा पनि भेउ थिएन ।
सांसद भएपछि भेट्न जाँदा तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले ‘अंग्रेजी कस्तो छ ?’ भनेर पनि सोध्नुभएको थियो रे, होइन ?
त्यसरी सोध्नुभएको होइन । उहाँ मलाई बारम्बार अंग्रेजी राम्रो बनाउनु चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । आफू गाउँको स्कुलमा पढेको । ४ कक्षामा बल्ल एबीसीडी सिकेँ । पत्रकारितामा ब्याचलर गरेँ । त्यही अनिवार्य अंग्रेजी पढेको भर हो । अंग्रेजी सिक्नैपर्छ भनेर डटेर लागिएन पनि ।
मन्त्री भएपछि अंग्रेजीले कत्तिको दुःख दिएको छ ?
अहिले निकै महसुस गरेको छु । हामीले जतिसुकै नेपाली भाषालाई माया गरे पनि विभिन्न सन्दर्भमा अंग्रेजी आवश्यक भइहाल्छ । विदेशीहरुसित द्वीपक्षीय भेटघाटमा दोभाषे राख्नुपर्दा अंग्रेजीमा सोझै संवाद गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अवश्य लाग्छ ।
तथापि फिटिक्कै बोल्न नजान्ने चाहिँ होइन । हाइ–हेल्लो गर्न, सन्चो–बिसन्चो सोध्न र सामान्य कुराकानी गर्न सक्छु । विषयगत कुराकानीमा प्रवेश गर्दा चाहिँ दोभाषेको सहयोग लिन्छु ।
विदेशीहरुले बोलेको अंग्रेजी बुझ्न चाहिँ कत्तिको गाह्रो हुन्छ ?
बुझ्न चाहिँ धेरै हदसम्म बुझ्छु । अष्ट्रेलियन–अमेरिकनले बोलेको बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ । एसियनको चाहिँ शतप्रतिशत नै बुझ्छु । समग्रमा ७० प्रतिशत बुझ्छु र १५ प्रतिशत फर्काउँछु ।
खासमा पश्चिमाहरुले बोल्ने टोन फरक पर्ने भएकाले बुझ्न गाह्रो हुने हो । जस्तो– हामी नेपालीहरुले पनि त सुद्ध नेपाली भाषामा सम्वाद गर्दैनौं नि ? हामीले कुनै नेपाली अलिअलि जानेको विदेशीलाई ‘काँ हिँड्या ?’ भन्यो भने उ अलमल्ल पर्छ । ‘तपाईं कहाँ हिँडिरहनु भएको छ ?’ भनेर सोध्दा उसले बुझ्न सक्छ । हामीलाई अंग्रेजी पनि त्यस्तै हो ।
विदेशीमाझ भाषण गर्नुपर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
लिखित भाषण गर्ने हो । अंग्रेजीमा लेखिएको पढ्न त सक्छु नि । लेखेको कुरा राम्ररी बुझेर मात्रै पढ्छु । कतिपय उच्चारण मिल्दैन होला । तर, यो ठूलो कुरा होइन । अंग्रेजी हाम्रो न्याटिभ ल्याङ्वेज पनि त होइन नि ।
भारतीयहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म उनीहरुसँग हिन्दी चाहिँ बोल्दिनँ । सामान्य कुराकानी अंग्रेजीमा गर्छु र विषयगत कुराकानीमा दोभाषे प्रयोग गर्छु ।
हिन्दी फिटिक्कै आउँदैन ?
आउँदै नआउने होइन, तर शुद्ध आउँदैन । कनीकनी हिन्दी बोल्नैपर्छ भन्ने पनि त छैन ।
तपाईंले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सामसुङको आइफोन छ भनेर लेखिदिनुभयो । यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै मजाक उडाइयो । यो त्रुटीचाहिँ अज्ञानतावस भएको हो कि के हो ?
त्यो एउटा मानवीय त्रुटी हो । मेरो नाममा भरिएको फाराम भएकाले मैले जिम्मेवारी त लिनैपर्छ । तर, मेरो हातबाट भएको गल्ती चाहिँ होइन । नत्र मेरो ह्यान्डराइटिङ चेक गर्दा पनि हुन्छ ।
मैले आफ्नो निजी सहायकलाई फाराम भर्न लगाएको थिएँ । मैले भनेको आधारमा उनले भर्दै थिए । मोबाइल के लेख्ने भने ? मसित दुईवटा मोबाइल थिए, एउटा सामसुङको र अर्को एप्पलको । मैले दुवै लेख्न भनेँ । उनले सामसुङ/आईफोन लेख्नुपर्नेमा सामसुङ (आईफोन) लेखिदिएछन् । विषय सानो थियो, तर ठूलो बनाइयो । तर, यस्ता कुरालाई जति मथे पनि घ्यू निस्किने होइन ।
फाराम भरेपछि आफूले पनि त जाँच्नुभएको थियो होला नि ?
मैले हेरिनँ । सहयोगीमा विश्वास गरेँ । के हेरिरहनु पर्ला र भन्ने भयो । तर, मैले आफूसँग भएको सम्पत्ति लुकाएको त होइन नि । लुकाएको भए पो ठूलो अपराध हुन्थ्यो ।
सम्पत्ति विवरणकै विषयमा प्रश्न सोध्दा टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम नै बन्द गराइदिनुभयो । किन यतिसम्म कठोर ?
अहिले यो विषयमा फर्किन चाहन्नथेँ । तर, सोधिहाल्नु भो । म तपाईंलाई आज यथार्थ भन्छु, ।
मैले त्यो कार्यक्रम बन्द गराएकै होइन । मैले चाहेको भए त उनलाई मुद्दा हालेर ठिंगुर्‍याउन सक्थेँ । सो अन्तरवार्तामा अन्तरवार्ताकार अत्यन्तै पूर्वाग्रही र नियोजित ढंगले पेश भएका थिए । उनले सोधेका कतिपय प्रश्न त जवाफ दिन लायक पनि थिएनन् । तैपनि जवाफ दिएँ भन्नुस् ।
अन्तरवार्ता आयो, गयो मलाई मतलब पनि थिएन । तर, जब अन्तरवार्ताको एउटा सानो क्लिपलाई काटेर उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा हाले, त्यसबाट उनको नियत छर्लंग भयो ।
म पनि पत्रकारिताको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि अन्तरवार्ताको एउटा टुक्रालाई मात्र झिकेर गलत क्याप्सनसहित पोष्ट गर्नु पत्रकारिताको मर्यादामा पर्दैन । अर्को कुरा, त्यो टेलिभिजनको अन्तरवार्ता टेलिभिजनको सम्पत्ति हो । उनले त्यसको एउटा पार्ट काटेर आफ्नो अकाउन्टमा पोष्ट गर्दा मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो ।
त्यही झोंकमा कार्यक्रम नै बन्द गराइदिनुभयो होइन ?
मैले माथि नै भनेँ नि, कार्यक्रम मैले बन्द गराएको होइन । मैले अन्तरवार्ता दिएर बिर्सि पनि सकेको थिएँ । तर, उनले त्यो क्लिप हालेर अन्तरवार्ताका कारण आफ्नो कार्यक्रम बन्द गराइएको भन्दै दुष्प्रचार गरेछन् । म त सामाजिक सञ्जाल धेरै चलाउँदा पनि चलाउँदिनँ । त्यहाँ त हंगामा भइसकेछ । मलाई तारन्तार फोन आउन थाले । त्यसपछि मनहरीजीले विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएछ । अनि बल्ल मैले मनहरीजीलाई फोन गरेर सोधेको हुँ ।
त्यसोभए तपाईंलाई खुशी पार्न उहाँले कार्यक्रम बन्द गराइदिनुभएको हो ?
त्यस्तो पनि होइन रहेछ । खासमा त्योबेला वल्र्ड कप सुरु हुन लागेको थियो । युवाहरु कोही मेस्सी, कोही रोनाल्डो, कोही कसको जर्सी लगाएर वल्र्डकप पर्खिरहेका थिए । नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण त गर्नुपर्‍यो । संयोगले विश्वकप फुटबल हुने समय र त्यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण हुने समय जुध्ने रहेछ । अब विश्वकपलाई प्राथमिकता दिने कि एउटा पार्टीका कार्यकर्ताको टक शोलाई ? त्यही भएर टेलिभिजनले करारको कार्यक्रम खारेज गरेको रहेछ । र, उनले यसमा राजनीतिककरण गर्न खोजेछन् । भएको यत्ति हो ।
तर, विश्वकपपछि त निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो होला नि ?
किन दिने ? त्यो कुनचाहिँ हेर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो र ? देशमा १२८ वटा टेलिभिजन छन् । यदि महान अन्तरवार्ताकार थिए भने अरु टेलिभिजनले तानातान गरेर लैजान्थे होला नि उनलाई । जब सरकारविरुद्ध नै यसरी नियोजित ढंगले उत्रिएका छन्, भने फिर्ता गर्ने प्रश्नै आएन ।
प्रश्न पनि कस्ता–कस्ता भने, बोको काटेर किन क्वार्टर छिर्नुभयो रे । ए बाबा मैले कहिले बोको काटेँ भन्दा प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्रीले काटे नि भन्छन् । अब मुख्यमन्त्रीको जिम्मा म लिन सक्छु त ? फेरि सोध्छन्, कम्युनिष्ट भएर दियो किन बाल्नुहुन्छ ? मन्दिरमा किन ढोग्नुहुन्छ ? नढोगेर के लात्तीले हान्दै हिँड्ने ? हरेक पुण्यकार्य गर्दा दियो बालिन्छ नि । त्यो पनि भनिरहनुपर्छ ? पत्रकारले त जे विषयमा अन्तरवार्ता गर्न बोलाएको हो, त्यसमै केन्द्रित हुनु पर्‍यो नि । जथाभावी वाहियात प्रश्न सोधेपछि झोक चल्दैन ? अन्तरवार्ता त मैले पनि धेरै गरेको हुँ । कडा प्रश्नहरु पनि सोधेकै हुँ । तर, यो त तरिका भएन नि । पत्रकारको मात्रै डेमोक्रेसी ? हाम्रो चाहिँ होइन ?
सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीको माइतीबाट सुन ल्याएको भनेर बकाइदा उल्लेख गर्नुभएको थियो । एउटा कम्युनिष्टले यसरी दाइजो लिन पनि मिल्छ ?
यसमा एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु । खासमा मेरो दुईपटक बिहे भयो । जात नमिल्ने (उनी नेवार हुन्) भएकाले उनको परिवारले बिहेका लागि सहमति दिएका थिएनन् । त्यसैले हामीले आफूखुशी गुहेश्वरीमा गएर सानो जमघटमा बिहे गर्‍यौं । मेरा केही साथीहरु बिहेमा थिए । करिब ४५ सय खर्च भएको थियो ।
तर, बिहे गरेको लामो समयसम्म उनको परिवारले मलाई ज्वाइँ स्वीकार गरेन । उनको माइतीमा आउजाउ नै भएन मेरो । जब हाम्रो छोरा जन्म्यो, बल्ल उहाँहरु अलिकति लचिलो बन्नुभयो । अनि फेरि परम्परागत रुपमा बिहे गर्ने शर्त राख्नुभयो । ठीक छ, सधंै सम्वन्ध बिगारेर पनि त भएन भनेर हामी तयार भयौं ।
परम्परागत बिहे गर्दा उनीहरुले आफ्नी छोरीलाई के दिए–दिएनन् भनेर मैले सोध्ने कुरा भएन । श्रीमतीलाई बाबुआमाबाट केही लिन पाउँदिनस् भनेर रोक लगाउने कुरा पनि आएन । त्यो दाइजो भन्दा पनि बाबुआमाले छोरीलाई दिएको उपहार न हो ।
मैले सम्पत्ति विवरणमा त्यो पनि लुकाइनँ । ६/७ तोला सुन उनको माइतीबाट आएकै हो । बाँकी ८/१० तोला चाहिँ मेरो आफ्नो हो । सम्पत्ति लुकाए पो अपराध, देखाउँदा केको अपराध ?
भनेपछि दोस्रोपटक बाजागाजा बजाएरै बिहे गर्नुभो ?
बजाएकै हो । जन्तीचाहिँ लगेको थिइनँ । बेहुलीपक्षका मात्र पाहुना थिए । उहाँहरुको प्रचलनअनुसार बेहुला–बेहुलीले पाहुनालाई आफ्नै हातले खाना सर्भ गर्नुपर्ने रहेछ । त्यही गरियो । यति गर्दा उनको माइती जाने बाटो खुल्यो, मेरो ससुराली जाने, अनि छोराको मावली जाने ।
अब पछाडि फर्किउँ है । तपाईंको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो हो ?
काभ्रेको निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको हुँ । चार जना दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीसहितको ठूलो परिवार थियो । बुवा खेतिपातिका साथै पुरेत्याइँं पनि गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको प्रभावले गर्दा मैले पनि अलिअलि ‘आतेपाते’ सिकेको थिएँ । तर निरन्तरता दिन सकिनँ । अहिले त बिर्सिसकें ।
बाल्यकाल कस्तो थियो ?
सामान्य हो । घाँस–दाउरा गरेरै हुर्केको हुँ । प्राविसम्म गाउँकै स्कुलमा पढेँ । निमावि स्कुल सवा घण्टाको दुरीमा थियो । आउजाउ गर्न तीन घण्टा लाग्ने । मावि स्कुल झन् टाढा ।
घरमा के–के काम गर्नुहुन्थ्यो ?
घाँस काट्ने, दाउरा खोज्ने, कोदालो खन्ने, गोबर सोहोर्ने यस्तै त हुन् गाउँघरका काम । सबै गरियो ।
हलो जोत्नुभएन ?
त्यतिबेला गाउँमा अलिकति सामन्ती सोच नै भएकाले बाहुनले हलो जोत्नुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । यद्यपि, एकाध पटक जोतेको छु । अनुभवसम्म छ भनौं न ।
पढाइ चाहिँ कस्तो थियो ?
कक्षा १ देखि नै फस्र्ट भएको हुँ । ८ कक्षासम्म निरन्तर फस्र्ट भएँ । ८ पास भएपछि परिवारमा अलिकति समस्या आयो । परिवारका सदस्यहरु एकपछि अर्को बिरामी पर्दा मैले ५/६ महिना स्कुलै जान पाइनँ । अब पढाई यति नै होला जस्तो भइसकेको थियो । परिवारबाट पनि अब ८/८ कक्षा पढेपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने खालका कुराहरु भएका थिए ।
कक्षाको फस्र्ट व्वाई नै विद्यालय नआएपछि स्कुलमा चर्चा भएछ । त्यसपछि स्कुलका टिचरहरु घरमै आउनुभयो । उहाँहरुसँग बुवाआमाले अब पैसा खर्च गरेर बढाउन नसक्ने बताउनुभएपछि उहाँहरुले मलाई होस्टलमा राखेर निशुल्क पढाइदिने व्यवस्था मिलाउनुभयो । त्यसपछि होस्टलमा बसेर पढ्न थालेँ । तर, लामो समय पढाइ छुटेकाले पहिलेको लय समात्न गाह्रो भयो । एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेँ ।
राजनीतिमा कहिलेदेखि लाग्नुभएको हो ?
राजनीति राम्ररी नबुझ्दा नै म राजनीतिमा लागिसकेको थिएँ । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रभाव ममा परेको थियो । ५ कक्षामा पढ्दा अनेरास्ववियूको सह–प्रारम्भिक कमिटी सदस्य भएको हुँ । ०४० सालमा ६ कक्षा पढ्दा मैले पिस्कर हत्याकाण्डको विरोधमा झण्डा बोकेर भाषण नै ठोकेको थिएँ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेन ?
पक्राउ पर्ने र छुट्ने त भइरहन्थ्यो । राजनीतिमा सक्रिय भएपछि स्कुलले पनि बारम्बार निष्काशित गथ्र्यो । तर, केही दिनपछि फेरि भर्ना नलिई सुखै थिएन ।
अनि पत्रकारिता ?
स्कुलमा पढ्दैदेखि लेखनमा रुची थियो । अखिलका कमिटीहरुमा आवद्ध भएपछि लेखापढीका कामहरु पनि हुन्थे । मेरो लेखाई राम्रो भएकाले त्यस्तो जिम्मेवारी मैले बढी पाउथेँ । काठमाडौंबाट निस्किने साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा पाठकपत्रहरु पठाउने गर्थेँ । त्यतिबेलाका दृष्टि, प्रकाश र छलफलमा लेख्ने गर्थेँ । एसएलसी पास भएर काठमाडौं आएपछि ‘छलफल’ बाट रिपोर्टिङको काम सुरु गरेको हुँ ।
काठमाडाै‌ँमा आएर कोसित बस्नुभयो ?
साथीहरुसँग मिलेर बसियो । एउटा कोठामा १०/१२ जनासम्म बसिन्थ्यो । तर, धेरै हल्लाखल्ला हुने भएपछि घरबेटीले निकाल्थे । त्यसपछि अर्को ठाउँ सर्‍यो । करिब २०/२२ वटा नै डेरा सरियो होला ।
एउटा कोठामा १०/१२ जना कसरी अटाउने ? कसरी सुत्ने ?
जसरी पनि अटाउनै पर्‍यो नि । राति सुत्दा हामी बडो मितव्ययी हुन्थ्यौं । चेपाचेप गरेर खाटमा तेर्सोपट्टि सुतिन्थ्यो । एउटा कोल्टे सुतेपछि अर्को कोल्टे फेर्न मिल्थेन । कहिलेकाहीँ साथीहरु थपिए भने पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो । कुकुरका छाउराजसरी सुतेको थाहा पाएपछि घरबेटीले कोठाबाट निकाल्थे ।
व्यवस्थाविरोधी मिसनमा लागेपछि दुःख त पाइने नै भयो । त्यो संघर्षकै एउटा कालखण्ड थियो ।
पैसाको कत्तिको दु:ख हुन्थ्यो ?
पैसा धेरै खर्च गरिन्थेन । त्यतिबेला कोठाभाडा डेढ–दुई सय थियो होला । त्यो पनि धेरैजनाले मिलेर तिर्ने । सात मोहोरमा मम पाइन्थ्यो । दाल चामल घरबाट पनि आउँथ्यो ।
साप्ताहिक पत्रिकाले कति तलब दिन्थे ?
सुरुमा तलब भन्ने नै थिएन । पार्टीलाई सहयोग गरेको हो, के तलव हुनु ? साह्रै खाँचो पर्‍यो भने १/२ सय रुपैयाँ मागिन्थ्यो । प्रायः अफिसले खाजा खुवाउँथ्यो । पत्रिका निस्किने अघिल्लो दिन राति भात पनि खुवाउँथ्यो । त्यही हो । बहुदल आएपछि चाहिँ अलिअलि पैसा पाउन थालियो ।
त्यतिबेला र अहिलेको पत्रकारितामा कति फरक पाउनुहुन्छ ?
अहिलेजस्तो सुविधा केही थिएन । इन्टरनेट त टाढाको कुरा भयो । फोन पनि दुर्लभ नै थियो । रिपोर्टिङ गर्न दुःख हुन्थ्यो । लेटरप्रेसमा छपाई हुन्थ्यो । अहिलेको पत्रकारिता बढि इन्टरनेट केन्द्रित भयो । त्यतिबेला साप्ताहिक पत्रिका नै मुलधार थिए ।
तपाईंहरुले गरेको पत्रकारिता त खासमा पार्टीकारिता थियो होइन ?
हामीले घोषितरुपमै मिसन पत्रकारिता गरेका हौं । त्यसमा लजाउनुपर्ने केही छैन । बरु अहिले चाहिँ व्यवसायिक पत्रकारिताको खोल ओढेर पर्चाकारिता गर्नेहरु धेरै छन् ।
मूलधारका मिडिया कम्युनिष्टप्रति पूर्वाग्रही छन् जस्तो लाग्छ ?
पूर्वाग्रही मात्र होइन, केही–केहीले त उधुमै गरेका छन् । उनीहरुको दिमागमा २० औं शताब्दीको साम्यवादी भूत सवार छ । उनीहरु नेपालका कम्युनिष्टमा पोलपोट खोजिरहेका छन् । त्यस्तो चरित्रको माग गरिरहेका छन् । तर, जति माग गरे पनि हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौं । हामी कम्युनिष्ट अवश्य हौं, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्दतीलाई अंगालेका कम्युनिष्ट ।
तर, तपाईंहरुले जस्तो निश्चित राजनीतिक दलको प्रचारकको भूमिका त खेलेका छैनन् नि अहिलेका मिडियाले ?
अहिले पनि चुनावका बेला सम्पादकहरु चारतारे झण्डा बोकेर बेला दौडिएका फोटा देखेकै छौं । राजनीति र पत्रकारिता धेरै टाढाको विषय पनि होइन नि ।
मिडियाले पूर्वाग्रही भएर समाचार लेखेको कुनै ठोस उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
कति छन्, छन् । अस्ति चिनियाँ राजदूतले बोलेका कुरालाई मिडियाले के हेडलाइन बनाए हेर्नुस । मिसन छ कि छैन, यसैबाट थाहा हुन्छ । उहाँले के बोल्नुभएको थियो र मिडियाले के लेखे ? मैले बोलेका कुराहरु बंग्याइएका, अधुरो र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रकाशित गरिएका घटना त कति छन् कति । तर, मेरो बानी के छ भने म मिडियामा आएका कुराको खण्डन गरेर बस्दिनँ ।
तपाईंले बोलेको कुन कुरा त्यसरी बंग्याइयो ?
जस्तो– मलाई बिहीबारको एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणका बारेमा सोधिएको थियो । मैले बोलेको कुरा के थियो भने विष्णु पौडेल पहिलो क्रेता होइन । सायद उहाँ अरुबाट ठगिनुभो । जोबाट ठगिनुभएको छ उसले क्षतिपूर्ति देला । सरकारी जग्गा सबैभन्दा पहिले कसको नाममा आयो त्यही न पर्ने हो । तर, यसलाई सरकारले विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेको भनेर प्रचार गरियो । अरु पनि घटना छन् यस्ता ।
प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ, केपी ओलीसँग तपाईंको निकटता कहिलेदेखिको ?
अलि पछि नै हो, उहाँलाई मैले भेटेको । एमालेको नौ महिने शासनकालमा उहाँ गृहमन्त्री हुँदा म रेडियो नेपालमा ‘घटना र विचार’ कार्यक्रमका लागि रिपोर्टिङ गर्थेँ । तर, त्यसबेला पनि उहाँसँग मेरो भेट जुरेन । त्यो सरकार ढलिसकेपछि एउटा कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ, जहाँ उहाँले मदन भण्डारीको विषयमा बोलेको सुनेँ । उहाँले करिब साढे दुई घन्टा बोल्नुभएको थियो । त्यही भाषणबाट मेरो मनमा उहाँप्रति बेग्लै छाप पर्‍यो । मदन भण्डारीको वास्तविक उत्तराधिकारी बन्न सक्ने गुण उहाँमा मैले भेटेँ ।
त्यसयता मैले उहाँको विचारलाई सँधै साथ दिएको छु । यस हिसाबले वैचारिकरुपमा सधंै निकट रहेँ । अरुखालको विशेष सम्वन्ध चाहिँ केही पनि होइन ।
अहिले तपाईंका धेरै लक्षण प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्छ भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त तपाईंलाई ‘केपी ओलीको लत्पतिएको फोटोकपि’ को संज्ञा दिनुभयो । के त्यस्तै हो त ?
म कांग्रेसको प्रवक्ताले के भन्नुभयो भन्नेतिर जान चाहन्न । हिंसालाई हिंसा भन्न नसक्ने प्रवक्ताको के कुरा गर्नु ? उहाँ एउटा राम्रो, असल, क्षमतावान युवा हुनुहुन्छ । उहाँको प्रगतिको कामना छ ।
उहाँले मात्रै होइन, जनमानसमा पनि तपाईंलाई केपी ओलीको प्रतिबिम्बका रुपमा हेर्ने गरिएको बारे जानकार हुनुहुन्न ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? ‘स्कुल अफ थट’ भन्ने पनि त हुन्छ । उहाँको वैचारिक, सैद्धान्तिक प्रभाव ममा पर्नु कुन आश्चर्यको कुरा भयो ?
स्वभाव पनि त मिल्छ नि, दुवैजना छुच्चो बोल्ने…
शेरबहादुर देउवाले साझा सवालमा पत्रकार हप्काउँदा त्योचाहिँ मीठो बोलेको हो ? सबैको आफ्नो शैली हुन्छ । मैले अघि नै भनिसकेँ कि म छुम्चो होइन, हक्की छु ।
प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ किन छुच्चो भनिएको होला ?
आरोप लगाउने अरु कुरा नभेटेपछि छुच्चो भनेका हुन् । उहाँका विचार–सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । त्यसैले स्वभाव र शैलीको आलोचना गरेर बस्छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा त्यति लोकप्रियता कमाउनुभएका प्रधानमन्त्री अहिले किन अलोकप्रिय हुनुभयो त ?
त्योबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा निकै अन्तराल छ । त्योबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अहम् बनेको थियो । अहिले त हामी देश निर्माण गर्ने चरणमा छौं । जनताले छिटोछिटो नतिजा खोजिरहेका छन् । चाहेको गतिमा सरकार हिँड्न सकेन होला । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिबेला आफूले उठाएका मुद्दाबाट अहिले पनि एक इञ्च ब्याक हुनुभएको छैन । फेरि, लोकप्रियता र अलोकप्रियताको मापन कसरी गर्ने ?
प्रधानमन्त्रीेको निजी निवास बालकोटमा बसिरहँदा तपाईलाई कतिको सहज लागिरहेको छ ?
मन्त्री क्वार्टर नपुगेका कारण वाध्यताले बसेको हुँ । सबै कुरा ठिकै छ ।
बालकोटबाट सिंहदरबार दैनिक आउजाउ गर्दा जामले कत्तिको दिक्क बनाउँछ ? मन्त्री भएर पनि जाममा बस्नुपर्दा विरक्त लाग्छ कि ?
जडीबुटी र कोटेश्वरमा बढी जाम हुन्छ । त्यतिबेला मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल खोल्छु, अनलाइन न्यूजहरु हेर्छु । मन्त्री आउँदा बाटो खाली गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दिनँ । सैयौं, हजारौं जनता यही जाम खेपेर आउजाउ गरिरहेका छन्, मैले के गुनासो गर्ने । मन्त्री भन्दैमा म आफूलाई कुनै विशिष्ट प्राणी ठान्दिनँ ।
सबैलाई हतार भइरहेको हुन्छ । कसैले पनि एक इन्च ठाउँ छोड्दैन । अनि आफ्ना कारणले आफैंलाई जाम हुन्छ । उतापट्टि अन्डरपास बनाएर माथि र तल गर्न सक्दा जाम कम हुन सक्छ भन्ने छ ।
जडिबुटीमा आफ्नै घर छ क्यारे, त्यहाँ किन नबस्नुभएको ?
यी यही कोठा जत्रो घर छ । एक तल्लाको । पार्किङ छैन । भेटघाटको लागि स्पेस छैन । मन्त्री भएपछि त्यहाँ सम्भव नै भएन ।
घर कहिले बनाउनुभएको हो ?
०६० सालमा । त्यहाँ ८ आना जति जग्गा थियो । चार आना बेचेर एक तल्ले घर बनाएको हुँ । ३ आना ३ पैसा ३ दाममा त्यो घर बनेको छ । कति साँघुरो छ, आफैं अञ्दाज गर्नुस । तर, मन्त्रीबाट हटेपछि त बस्ने त्यहीँ नै हो ।
यतिका वर्षसम्म तल्ला किन थप्नुभएन ?
खोइ, थप्न सकेको छुइनँ ।
पैसा नभएर त होइन होला ?
पैसा भएको भए अवश्य थप्थेँ होला ।
अहिले घरभाडामा लगाउनुभएको छ ?
छैन, छोरा बस्छ ।
प्रधानमन्त्रीको घरमा बसिरहेको कुरालाई लिएर कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले तपाईंलाई ‘चौकीदार’ पनि भन्न भ्याउनुभयो, तपाईंको उहाँलाई केही जवाफ छ ?
यति मात्र भन्छु कि चोरी–डकैति, भ्रष्टाचार, ठगी गर्नुभन्दा चौकिदारी नै राम्रो हो । उहाँलाई यति जवाफले पुग्ला ।
देश बनाउने यतिका वर्षदेखि राजनीति गर्नुभयो । रातदिन खटिरहनुभएको छ । तर, जनताले तपाईंलाई रुचाएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा नानाथरी गाली खानुहुन्छ । यसले कत्तिको विचलित बनाउँछ ?
जनताले रुचाएका छैनन् कसरी भन्नुहुन्छ ? जनता भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन । सामाजिक सञ्जालमा आउने मतहरु दलगत स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् । जनताको घरमा गएर सोध्नुस् । म हरेकपटक जब जिल्ला जान्छु, जनताले न्यानो स्वागत गर्छन् । काभ्रे जिल्लाको नाम राख्नुभएको छ भन्छन् । अरु भेट्नेहरुले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर प्रोत्साहन दिन्छन् ।
खराब मानसिकताका मानिसहरु त जहाँ पनि भइ नै हाल्छन् । हुँदाहुँदा पोर्न साइट बन्द गराउँदा पनि मलाई सरापे । तपाईंकै अनलाइनमा पोर्न साइट बन्द गराइएको समाचार आउँदा २२ प्रतिशतले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अहिले त मेरो न्यूज आउनासाथ पढ्दै नपढी गाली गर्न थाल्छन् । तर, यस्तो गालीले मलाई हतोत्साही बनाउँदैन ।
पार्टीसँग निकट रहेका व्यक्तिहरुले पनि त तपाईंको कटु आलोचना गरेका छन् नि । अधिवक्ता शम्भु थापाको भिडियो त हेर्नुभयो होला । उहाँले त तपाईंको हुलियामाथि समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
म कसैप्रति व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । पार्टीभित्र पनि सबै समर्थक मात्रै हुँदैनन् । मेरो हुलिया मन परेन भनेर आलोचना गर्ने उहाँको स्वतन्त्रताको होला । मैले त त्यसो भनेको छैन । मेरो हुलिया सबैका सामु हाजिर छ ।
उहाँको तपाईंसँग कुनै व्यक्तिगत रिसइबी पो थियो कि ?
उहाँ मैले चिनेकै व्यक्ति हो । कोबाट प्रभावित भएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो थाहा भएन । म समर्थकहरुको खोजीमा हावामा तरवार नचाएर हिँड्दिनँ ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको नेता । अहिले पत्रकारहरुलाई नै कँज्याउने गरी कडा विधेयक ल्याउन आँट्नुभएको छ । यो तपाईंकै सोच मुताविक हो कि कुनै परिबन्दमा पर्नुभयो ?
तपाईंले पनि ऐन नै नपढी टिप्पणी गर्नुभयो जस्तो लाग्यो । जे हल्ला चलाइएको छ, त्यस्तो केही पनि होइन । ऐन अध्ययन नगरिकन मिथ्या प्रचार गर्नेहरुलाई स्पष्टीकरण दिएर साध्ये पनि हुँदैन । यो ०७२ सालबाटै छलफलमा आएको कानून हो ।
ऐनको औचित्य सावित गर्ने क्रममा अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्यूदण्ड दिइन्छ भनेरसम्म बोल्नुभयो । यस्तो सफेद झूट नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?
तपाईंले पनि मेरो पूरा अभिव्यक्ति सुन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? कुनै कुनै मिडियाले पूरा भिडियो पनि राखेका छन् । मैले भनेको छु कि अमेरिकामा आतंकवादलाई समर्थन गर्‍यो भने अर्को ऐन आकर्षित हुन्छ, जसमा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ । पत्रकार भनेर छुट दिइँदैन । ‘आतंकवादलाई समर्थन गरेको खण्डमा’ भन्ने शब्दावली झिकेर अनर्गल प्रचार गर्न पाइन्छ ? आनलाईनखबरबाट